Imininingwane yegagasi elibandayo laseSiberia elihlasela iSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukubanda okubandayo ukuthi sisuka emvelaphi yaseSiberia sifinyelela ezingeni eliphezulu kakhulu kulo lonke elaseSpain. Ngokuqondene namarekhodi okushisa, afinyelela ikakhulukazi kumazinga aphansi angajwayelekile.
Hhayi amakhaza kuphela, kepha nemvula nomoya onomthelela kulokhu kugagasi okubandayo kwehlisa izinga leqhwa ezindaweni ezingalindelekile. Ake sibheke imininingwane yalesi sifo esibandayo saseSiberia.
1 Amazinga okushisa angaphansi kuka-zero
2 Amazinga eqhwa
3 Ezinye izexwayiso ezimayelana nesimo sezulu esibi
4 Ukwanda kokusetshenziswa kukagesi
Amazinga okushisa angaphansi kuka-zero
Kwamanye amadolobha aseLleida, amazinga okushisa abe phansi kakhulu aze afinyelela ku -12 degrees. Amanye amazinga okushisa aphansi avelele, njengobuncane esiteshini saseLleida-Bordeta, lapho amazinga okushisa angama -7,4 degrees aqoshwe khona. Irekhodi lokushisa eliphansi losuku eCatalonia, nokho, likuphawulile UDas, eLa Cerdanya, ene -21,6 degrees.
Ngokusho kwe-State Meteorology Agency, izifundazwe ezintathu zase-Aragon, i-ilavila, i-Burgos, iLeón, i-Segovia, i-Soria, i-Zamora, i-Girona, i-Lleida, i-Navarra, i-La Rioja ne-Asturias zizoba sexwayisweni le-orange (ingozi ebalulekile) ngenxa yamazinga okushisa aphansi. Futhi banesixwayiso ngobungozi obubalulekile eziQhingini zaseBalearic ngenxa yempumalanga ezoqhuma eMallorca naseMenorca edala izenzakalo zasogwini, njengaseGirona, ngesexwayiso esisawolintshi ngenxa yalesi sizathu, njengoba kulindelwa umoya onamandla onamandla amakhulu e-Empordà.
Amazinga eqhwa aphansi kakhulu kangangokuba iqhwa selifinyelele ogwini lwase-Alicante futhi selimboze omasipala abanjengoDénia neXàbia ngomhlophe, futhi liholele ekunqandeni isiminyaminya emgwaqeni i-Les Planes, oxhuma amadolobha womabili aseduze neMontgó. Ukuwa kweqhwa okunjalo akukaze kubhalwe kusukela ngawo-80.
Ezinye izexwayiso ezimayelana nesimo sezulu esibi
Kunconywe omasipala bezindawo ezinamazinga okushisa aphansi futhi obanda kakhulu ungathathi eyakho imoto uma kungenasidingo, njengoba zingadala izingozi nezinkinga ekusakazeni kwegazi. Kumasipala waseDénia, amakilasi ezikoleni amisiwe.
Ukwanda kokusetshenziswa kukagesi
Igagasi elibandayo eSpain lenyuse ukusetshenziswa kukagesi kokushisa. Lokhu kuholele emikhawulweni engakaze ifinyelelwe kusukela ngo-2012. ECatalonia, ukusetshenziswa kukagesi kukhuphuke ngo-7% ngenxa yegagasi elibandayo kwazise sekushiye cishe wonke umphakathi ngamazinga okushisa angaphansi kuka-zero degrees.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi abandayo » Imininingwane yegagasi elibandayo laseSiberia elihlasela iSpain